USB Lugs na njikọta
Ihe Njikọ Bimetallic
Njikọ ọla kọpa
Obere Volta ABC Ngwa
Mkpuchi ịkpọpu njikọ
Nga-gwara mmanụ Lug na uwe
Erughị ala mwekota
Eriri Optic USB Ngwa
N'elu Line Dabara Adaba
Iron Line Dabara Adaba
Ngwunye Volta ọkara
Okpomọkụ Shrinkable Na Silicon Rubber Ngwa
Ngwaọrụ na-ekpo ọkụ ọkụ
Silicon Rubber Ngwa
Onye na-ejide ọkụ ọkụ, Mpụ ọkụ ọkụ na Insulator
Ngwa wiwi na ọdụ
Ubi eriri eriri ọkụ nke Solar Farm na-eme ka nrụnye dị mfe ma belata ọnụ ọgụgụ zuru ezu
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọchịchọ maka ike anyanwụ etoola dị ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọzọ na usoro ike nke sitere na mmanụ ala ọdịnala, na omume nke ngwaọrụ ọgbara ọhụrụ na-agagharị na sistemụ nwere akara ukwu na ikike nrụpụta ka ukwuu. Otú ọ dị, dị ka capac ...
Super ngwaahịa akara ngosi: n'ime ụgbọ ala kachasị mma na NHRA [na Chevrolet] akụkọ ihe mere eme!
Dan Fletcher (Dan Fletcher) bu otu n’ime mmadu ato n’ime akuko itughari. O meriri ihe karịrị 100 mmeri NHRA, na-ebute ya ụzọ karịa ọtụtụ akụkọ ifo na egwuregwu ahụ, ma soro John Force na Frank Manzo (Frank Manzo) wee bụrụ otu egwuregwu. Ọ bụkwa naanị ya kpochapụrụ ...
Top key Player na-omimi analysis nke USB na njikọ njikọ a zuru ụwa ọnụ.
“Nnyocha nyocha nke eriri na njikọta na-enye nyocha zuru ezu banyere ahịa na njikọ njikọta, nke gụnyere eziokwu, nghọta na-eche echiche, data akụkọ ihe mere eme, na ọnụ ọgụgụ na-akwado na ụlọ ọrụ na-egosi ozi ahịa. Nchọpụta ntanetị na njikọ njikọta na ...
Kedu ihe bụ Njedebe Nwụrụ Anwụ?
A nwụrụ anwụ-ọgwụgwụ adịgide bụ ụdị osisi akara ngwaike na-ejikọ na anya thimbles na okporo ahịrị na nkwukọrịta ahịrị. Ha nwere otu ihe eji eme ihe nke na-enye ohere ịnyefe na antenna, usoro nnyefe, usoro nkwukọrịta na usoro ndị ọzọ. Ihe ndị nrụpụta ji ...
The erughị ala mwekota bụ otu ụdị nke erughị ala ngwaike oyiyi akwa, ọ na-bụ-eji na efefe nnyefe edoghi ma ọ bụ nkesa e. The erughị ala mwekota na-akpọ nwụrụ anwụ ọgwụgwụ nje mwekota ma ọ bụ quadrant nje mwekota, ọ bụ otu ụdị nke nnyefe akara mwekota. N'ihi na ọdịdị nke iri ...
Suspension mwekota a na-akpọ mwekota nkwusioru ma ọ bụ nkwusioru kwesịrị ekwesị. Dabere na ngwa ahụ, Nkwụsịtụ nkwụsịtụ na-ejide ihe mgbochi nkwusio maka eriri ABC, nkwụsịtụ nkwụsị maka eriri ADSS, njigide nkwusioru maka akara akara. Suspension mwekota bụ a n'ozuzu na-ekwu okwu nile di iche iche nke mwekota whi ...
Socket Clevis: Ntuziaka kachasị maka ndị na-ebubata ya
Kedu ihe bụ Socket Clevis? Socket clevis is also known as socket tongue bụ nnọọ ihe dị mkpa nke pole line technology. Ọ na-ejikarị na efefe n'elu ahịrị, nnyefe edoghi, na ike e. Ọ bụ ihe dị mkpa na ngwa ngwaike nke na-ejikọkarị ụdị oghere insulato ...
Gịnị bụ Guy Thimble maka Pole Line Hardware
Guy thimble bu ngwaike nke eji eme polo eji eme ya. Ha na-arụ ọrụ dị ka interface ejiri jikọọ waya nwoke ma ọ bụ nwoke ahụ. Nke a bụ ihe nkịtị na ndị nwụrụ anwụ ọgwụgwụ osisi edoghi na electric ike e. Ewezuga ojiji ndị a kpọtụrụ aha n'elu, mkpịsị ụkwụ nwa okorobịa ahụ jikọrọ mkparịta ụka esemokwu iji kpuchido ...
Noticelọ ọrụ maliteghachi mara YONGJIU.
site ha na 20-03-23
YONGJIU eletriki Ike Dabara CO., LTD maliteghachiwo nkịtị mmepụta. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ m ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị.
Ihe I Kwesịrị ịma banyere mgbochi nke Ọrịa NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)
E nwere nsogbu zuru ụwa ọnụ nke corona virus n'oge a. Oria a nwere ike gbasata site na ụkwara, zere ma ọ bụ kọntaktị ọzọ na mmiri. Followingzọ ndị a dị mkpa n'oge oge ntiwapụ ahụ Biko gbalịa ibelata ọrụ n'èzí dịka po ...
Ntuziaka maka ntinye nke mkpuchi njikọ ikuku
A na-eji ihe nkedo na-emechi ihe (IPC) iji jikọọ eriri dị larịị nke gbagọrọ agbagọ na eriri elekere ma ọ bụ eriri elekere eletrik (ọla kọpa ma ọ bụ aluminom) na-enweghị iyipu mkpuchi nke eriri. Anyị nwere ike ịmụta usoro nwụnye dị mfe site na eserese na-esonụ.
Ekwentị: +86 577 6178 7888
Ekwentị / WhatsApp: +86 18057751088
Adreesị: Jiaxi Industrial Mpaghara, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, China
USB mwekota, Ike USB Mwekota, Waya Mwekota, Aluminum USB Mwekota, Aluminom Electric Mwekota, Ọdụdọ eletriki,